Ukufakwa kwePlastiki yeTubing abavelisi kunye nababoneleli - iTshayina yeeTyhubhu zeZilinganisi zePlastiki
Imathiriyeli yesinxibelelanisi esivulekileyo kunye ne-locknut evulekileyo yenziwe ngokukodwa nge-polyamide. Inqanaba lokhuselo yi-IP50. Ukucima ngokwakho, ngaphandle kwe-halogen, i-phosphor kunye ne-cadmium (umyalelo we-RoHS uyanelisa). Uluhlu lobushushu ngu-min-30 ℃, max100 ℃, ixesha elifutshane120 ℃. Umbala umnyama (RAL 9005). Inokulingana ne-WYT evulekileyo yokutyubhisha. Izinto ezinokubakho kwisinxibelelanisi esivulekileyo senziwe ngokukodwa nge-polyamide. Sinentambo ye-metric kunye nentambo ye-PG.
Plastic Ingqiniba Connector
Isixhobo sokudibanisa ingqiniba yeplastiki yi-polyamide. Sinegrey (RAL 7037), emnyama (RAL 9005). Uluhlu lobushushu ngu-min-40 ℃, max100 ℃, ixesha elifutshane120 ℃. Idangatye-nekudodobalisa i-V2 (UL94). Inqanaba lokhuselo yi-IP66 / IP68. Idangatye-elidodobalisayo: Ukucima ngokwakho, ngaphandle kwe-halogen, i-phosphor kunye ne-cadmium, kudlule i-RoHS. Inokulingana nayo yonke imibhobho ngaphandle kwetyhubhu yeWYK. Sine-metric thread kunye ne-PG ngentambo kunye no-G.
Izinto eziphathekayo zenziwe ngethusi. Uluhlu lobushushu yi-min-40 ℃, max100 ℃. Sebenzisa amatywina afanelekileyo, isidanga soKhuselo sinokufikelela kwi-IP68. Sine-metric thread kunye ne-PG ngentambo kunye no-G. Ukufakwa ngokulula kwe-45 ° / 90 ° isikhululo sokudibanisa iingqiniba kunye nokugoba ukuze kubekwe ngexesha lofakelo.
Isinxibelelanisi seMetro ngeSnap Ring
Sisisixhobo esine-clasp yesixhobo sokufaka ityhubhu. Izinto zomzimba lubhedu olwenziwe nge-nickel; itywina lilungisiwe irabha. Isidanga sokukhusela sinokufikelela kwi-IP68. Uluhlu lobushushu yi-min-40 ℃, max100 ℃, sinentambo yeetriki. Uncedo yimpembelelo elungileyo kunye nokumelana nokungcangcazela, kwaye i-tubing inomsebenzi wokutshixa okuphezulu.
Isinxibelelanisi ngokuTywina iTywina ngoNcedo loXinzelelo
Izinto eziphathekayo zi-polyamide. Sebenzisa i-O-sealings efanelekileyo ngaphakathi kuluhlu lokuqiniswa, IP66 / IP68, usebenzisa ukutywina itshungama ujikeleze umsonto. Sinombala ongwevu (RAL 7037), omnyama (RAL 9005) umbala. Idangatye-nekudodobalisa i-V2 (UL94). Ukucima ngokwakho, ngaphandle kwe-halogen, i-phosphor kunye ne-cadmium, kudlule i-RoHS. Inokulingana nazo zonke i-tubing ngaphandle kohlobo lwe-WYK. Sinentambo ye-metric kunye nentambo ye-PG.
Isinxibelelanisi ngoNcedo lokuNgoba ngoNsimbi
Izinto eziphathekayo zi-polyamide kunye ne-nickel-plated thread. Idigri yokhuselo yi-IP68, kusetyenziswa ukutywina itshungama ejikeleze umsonto. Sinombala ongwevu (RAL 7037), omnyama (RAL 9005). Ukudibanisa ilangatye yiV2 (UL94). Uluhlu lwamaqondo obushushu yi-min-40 ℃, max100 ℃, yexesha elifutshane i-120 ℃. Ukucima ngokwakho, ngaphandle kwe-halogen, i-phosphor kunye ne-cadmium, kudlule i-RoHS. Iipropati kukuchasana kwefuthe okubalaseleyo, uqhagamshelo lwentambo ephezulu kakhulu, ukuqinisa iintambo. Inokulingana nazo zonke i-tubing ngaphandle kohlobo lwe-WYK. Sinentambo ye-metric kunye nentambo ye-PG.